UAmundøy Rorbu, uFrei nguKristiansund - I-Airbnb
UAmundøy Rorbu, uFrei nguKristiansund
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguArve
I-Amundøy Rorbu ikwindawo entle enexabiso eliphezulu ejikeleze iKristiansund. Ifulethi elitofotofo kwigumbi elidala elinomtsalane, elibuyiselweyo / indlu yesikhephe ngaselunxwemeni lolwandle, 20km ukusuka eKristiansund. (25 min drive) Iindwendwe zethu ziya kuba enkulu, ca. I-60 ye-square yeemitha zokuhlala, ene-balcony kunye ne-seaview ye-partial, ekhoyo. Iphangalele ngaphakathi nangaphandle. Indawo ebukekayo nethe cwaka. Phakathi kweHlobo ilanga litshona malunga ne-23H kule ndawo!
Isiseko esigqibeleleyo sohambo lwemini ukuya umz. Molde, Alesund, Geiranger, the Atlantic Road, Bud, Sunndalsøra, Smøla and Grip. Indawo entle yokukhwela ibhayisekile, ukuhamba kunye nokunyuka intaba ngokulula, kufanelekile ukuhlala apha ezinye iintsuku ezongezelelweyo.
4.83 · Izimvo eziyi-154
Iziqithi ezincinci i-Amundøy, iBrattøy kunye neFlatøy zenza uluntu oluselunxwemeni oluhle. Namhlanje kukho malunga nama-30 kuphela abemi abasisigxina apha. Kumaxesha angaphambili, ukuphila kwabo kwakubangelwa kukomiswa kwentlanzi ekuthiwa yicodfish, nto leyo ababeyenza kumatye angqonge iSiqithi baza kamva bawenza kwizixhobo zokomisa umbane kwiindawo zokugcina iimpahla.
Umbuki zindwendwe ngu- Arve
Ukuhlala kusekwe kwi-self catering. Ikhitshi elixhotyiswe kakuhle.
Iindwendwe kufuneka zicoce indlu xa zihamba.
Kufuneka uze nempahla yakho yokulala, okanye ungayirenta nge-nok 100 pr set ukuba siyazi ngaphambi kokufika kwakho.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Frei